SPECIAL [ बिशेष ]
एलआइसीमा सातादेखि बजारको नजर, पुँजी वृद्धिको चुनौतीबीच सेयर मूल्य भने दबाबमुक्त
अन्जना सुवेदी/बिजमाण्डू Jul 2, 2022 1:41 PM
काठमाडौं। सेयर बजारमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेका इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमध्ये एक हो, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल। समग्र बजारमा उतारचढाव जारी रहँदा पनि बढिरहेको यो कम्पनीको सेयर मूल्यले अब केही खास आउँछ कि भन्नेमा लगानीकर्ता देखिएका छन्।
कम्प्युटर होइन उद्यम सिकाउने मेलामा युवाको भीडले गरेको संकेत, स्वदेशमै उद्यम गर्ने हुटहुटी
बिजीशा बुढाथोकी/बिजमाण्डू Jul 2, 2022 10:06 AM
काठमाडौं। भक्तपुरका शुभाशिष उप्रेती भर्खर १५ वर्षका भए। उनी अहिले एसईईको परीक्षा सकेर बसेका छन्। ११ को पढाई सुरु भैनसकेपनि उनको छुट्टै व्यस्तता छ। सानैदेखि प्रविधिबाट निकै प्रभावित उनी आफ्नो व्यस्तताको कारण खुलाउँछन्, 'मेरो आफ्नै एउटा जिङ इन्कर्पोरेशन नामको स्टार्टअप छ।
'बजेटमा राखेको लक्ष्य भेट्याउन यसरी बनाउनुपर्छ मौद्रिक नीति,' डा. शालिकराम पोखरेलको लेख
डा शालिकराम पोखरेल Jun 30, 2022 6:38 AM
सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्ने लक्ष्य सहित प्रस्तुत भइसकेको छ।
सँगसँगै निकट भविष्यमा नै मुलुकको केन्द्रिय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीतिको
भूकम्प नचिन्ने नेपालको बिल्डिङ कोड, यसरी गर्न सकिन्छ सुधार, इन्जिनियर डा. उमेश पुरीको लेख
डा. उमेश पुरी Jun 29, 2022 9:00 AM
सन‍् १९०६ सम्म मान्छेहरुलाई भूकम्पले खासै के गर्छ थाहै थिएन। भूकम्पले भवनलाई हल्लाउँछ भनेर हावा जस्तै हिसाबले भवनको वालहरु वा स्ट्रक्चरको फसाड्समा ‘ल्याटरल’ लोड लगाउने गर्थे।
१९०६ देखि क्रमबद्धरूप (क्रोनोलोजिकल अर्डर)मा भूकम्प नियमित गयो। १९२३, १९४० मा अमेरिकामा ठूला भूकम्प गए।
तेलको मूल्य बढेपछि एसिया विद्युतीय बाइक र स्कुटरको हब बन्दै, उत्पादक कम्पनी छन् उत्साहित
शुक्र गिरी/बिजमाण्डू Jun 28, 2022 12:33 PM
काठमाडौं। बेलायतमा विद्युतीय सवारी साधन भन्नेवित्तिकै टेस्ला वा अन्य विद्युतीय कार भन्ने बुझाउँछ। त्यहाँ चार पाँग्रे सवारी साधन धेरै चल्छन्।
तर एसियामा भने व्यक्तिगत सवारीसाधनको चलन फरक छ। एसियामा सबैभन्दा बढी बाइक तथा स्कुटर व्यक्तिगत सवारीसाधनका रूपमा प्रयोग हुन्छ। एसियाली देशमा मोटरसाइकल तथा
अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू Jun 26, 2022 1:36 PM
विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्। यो घोषणासँगै उद्योगीहरु भारतमा सिमेन्ट निकासीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।
निर्यातका लागि सबैभन्दा पहिले भारत सरकारबाट नेपालका उद्योगले ‘आइएसआई’ (इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट)
अञ्जना सुवेदी/बिजमाण्डू Jun 25, 2022 3:18 PM
काठमाडौं। लगानीकर्ता माझ निकै लोकप्रिय ब्लु चिप कम्पनी हिमालयन डिष्टिलरीले पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा आफ्नो सेयर मूल्यको करिब ६४ प्रतिशत अधिक अंश गुमाएको छ।
सेयरले एक वर्ष यताकै न्युनतम मूल्य विन्दुलाई परीक्षण गर्दै छ। यद्यपि सेयर बजार साइकलको पहिलो
'धेरै बोल्ने पोजिसनमा छैन' भन्दाभन्दै पनि गभर्नरले खोल्न चाहेका धेरै कुराहरु
सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू Jun 23, 2022 6:10 PM
काठमाडौं। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखिसकेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा व्यस्त छन्। सरोकारवालाहरुसँग धमाधम सुझाव लिइरहेका छन् भने वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि अन्तरक्रियामा जुटेका छन्।
बुधबार गभर्नर अधिकारीले बिजमाण्डूले आयोजना गरेको वृहत्त छलफलमा आगामी मौद्रिक नीति
स्पन्ज आइरनको भन्सार शुन्यमा झारेपछि मेल्टिङ युनिट राख्ने प्रतिस्पर्धा, ७ वटा उद्योग आउँदै
अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू Jun 23, 2022 11:37 AM
विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकबाट स्पन्ज आइरनमा आधारित मेल्टिङ युनिटलाई संरक्षण गरे भने बिलेटमा आधारित फलामे डन्डी उद्योगमा लाग्ने राजस्वमा वृद्धि गरे।
त्यो विधेयकबाट मेल्टिङ युनिटको मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५
इभीमा न स्टकको खर्च, न त पर्याप्त पूर्वाधार, तैपनि चर्को नाफा, 'सरकारले मूल्य नियमन गर्नुपर्छ'
शुक्र गिरी/बिजमाण्डू Jun 19, 2022 3:21 PM
काठमाडौं। करिब १० दिनअघि नेपाल भित्रिएको विद्युतीय गाडी 'नेटा भी' ले यहाँ संसारमा सबैभन्दा ग्लामरस र चर्चित मानिएको इभी 'टेस्ला' आउँदाको भन्दा पनि बढी चर्चा पायो।
तर यो चर्चा गाडीका विशेषताका कारणभन्दा पनि मूल्यले गर्दा थियो। चौधरी समूहले ल्याएको
VIEW ALL NEWS FROM SPECIAL
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सीइओमा नाम सिफारिस भएका तीनमध्ये झापाका रमेश घिमिरे नियुक्त
काठमाडौं। सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यकारी अधिकृतमा रमेश
काठमाडौं। भक्तपुरका शुभाशिष उप्रेती भर्खर १५ वर्षका भए। उनी अहिले एसईईको परीक्षा सकेर बसेका छन्। ११ को पढाई सुरु भैनसकेपनि उनको छुट्टै व्यस्तता छ। सानैदेखि प्रविधिबाट निकै प्रभावित उनी आफ्नो
सँगसँगै निकट भविष्यमा नै मुलुकको केन्द्रिय बैंकको
१९०६ देखि क्रमबद्धरूप (क्रोनोलोजिकल
'बुढीगण्डकी निर्माण आगामी वर्ष थालिन्छ, ग्यारेन्टी गर्छु'- ऊर्जामन्त्री भुसालको अन्तर्वार्ता
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा